China High Quality CNC Pipe Threading Lathe စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |အလှည့်
1.This CNC ပိုက်ချည်စက်ကို အသစ်စက်စက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
2.ခုတင်ကို မူရင်းသုံးလွှာနံရံတည်ဆောက်မှုဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး နောက်နံရံကို 12° slope ဖြင့်စီစဉ်ထားသည်။ကုတင်၏လမ်းညွှန်ရထားလမ်း၏အကျယ်သည် 550 မီလီမီတာဖြစ်သည်။စက်၏ တိကျမှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို သေချာစေရန်အတွက် ၎င်းသည် စူပါအသံမီးငြိမ်းပြီး တိကျစွာအခြေခံထားသည်။
3. အဓိကကျသောဂီယာအုံအမျိုးအစား ဗိုင်းလိပ်တံယူနစ်၊ ဂီယာတွင် ခြေလှမ်းနှစ်ရပ်၊ပင်မမော်တာသည် ချည်အချောချောခြင်း၏လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရုံသာမက ထိရောက်သောဖြတ်တောက်မှုကိုလည်းရရှိသည့် Beijing CTB spindle servo motor ဖြစ်သည်။၎င်းသည် သာမာန်လှေစက်များကို အခြေခံ၍ ပြုပြင်ထားသော CNC စက်နှင့် လုံးဝကွဲပြားပါသည်။
4. တိကျသောကြိတ်ဂီယာများနှင့် အရည်အသွေးမြင့် ဝက်ဝံများကို quenching အသုံးချခြင်းသည် စက်ဆူညံသံကောင်းမွန်ကြောင်း သေချာစေသည်။
5. ခေါင်းစွပ်သည် ဗိုင်းလိပ်တံ၏ အပူချိန်မြင့်တက်မှုကို လျှော့ချပေးရုံသာမက ခေါင်းစွပ်များကို သန့်ရှင်းပြီး ချောဆီဖြစ်စေသည့် ပြင်းထန်သော ပြင်ပလည်ပတ်မှုအအေးပေးသည့် ချောဆီစနစ်ကို အသုံးပြုထားသည်။
6. အဆိုပါ X နှင့် Z axes များသည် တိကျသောဘောလုံးကို ဝက်အူတိုက်ရိုက်ဒရိုက်နှင့် ခဲဝက်အူဖိအားပေးထားသော တင်းမာမှုဖွဲ့စည်းပုံကို ခံယူသည်။Z-axis screw nut hanger သည် အဓိကကျသော သွန်းလုပ်ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်သည်။လမ်းပြမီးရထားကို YT ခါးပတ်ပျော့ဖြင့် တွဲထားသည်။ကုတင်ကုန်းနှီးစကိတ်ဘုတ်၏ အကျယ်သည် 300 မီလီမီတာ နှင့် အရှည် 550 မီလီမီတာ ဖြစ်သည်။ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ဤစက်၏အရွယ်အစားသည် 280 နှင့် 480 မီလီမီတာဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် လမ်းညွှန်တိကျမှုနှင့် စက်ကိရိယာ၏တိကျမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး စက်၏ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို ထိရောက်စွာတိုးတက်စေသည်။
7. စက်ကိရိယာ၏အဓိက drive ဂီယာကို SMTCL မှထုတ်လုပ်သည်။အကာအကွယ်စာရွက်သတ္တုအား သီးခြားဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး စံအအေးခံစတီးပြားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
စက်ကိုယ်ထည်၏ Max.turning အချင်း
ကိရိယာကိုင်ဆောင်သူ၏ အများဆုံးလှည့်ခြင်း အချင်း
မေးရိုးသုံးချောင်း လက်စွဲ chuck Φ400
မေးရိုးသုံးချောင်း လက်စွဲ chuck Φ500
မေးရိုးလေးခု လက်စွဲ chuck Φ800
Spindle စင်တာမှ Tool တပ်ဆင်မှု datum
Tool အပိုင်း အရွယ်အစား
Tailstock sleeve အချင်း
Tailstock sleeve ခရီးသွားခြင်း။
Tailstock အပေါက် သွယ်လျသည်။
ပြင်ပ လည်ပတ်မှု အအေးခံခြင်း။
ယခင်- ကြိတ်စက်ပံ့ပိုးမှုအတွက် ဗဟိုဒရိုက်စက်
နောက်တစ်ခု: Gantry အမျိုးအစား CNC တူးဖော်ခြင်းနှင့် ကြိတ်စက်